I-Rosario de la Rosa Mystica ➡ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
EbuKristwini, uphawu lweroses lwalusetyenziswa ukusukela kwinkulungwane yesithathu ukumela iparadesi, kodwa ukudibana kwayo nenani leVirgin kwaqala ngenkulungwane yesi-XNUMX, xa uEdulio Caelio ebhekisa kwintombi enyulu ngentetho ethi "Rose phakathi kwameva" , ukuza kuthi ga ngoku unxibelelwano phakathi kweeroses kunye nomama wethu ongcwele aluphelelanga. Ukuba ufuna ukwazi ukuba IRosari ye-Mystic Rose, Qhubeka nokufunda kwethu.
IRosari kwi-Mystic Rose. Funda ukuyenza.
1 Imbali yerosari yeRosa Mystica
1.1 Indlela yokuthandaza iRosari kwiRosa Mystica
1.3 Iimfihlakalo zovuyo ezisixhenxe: NgoMvulo, uLwesithathu, uLwesine, uMgqibelo nangeCawa.
1.4 Iimfihlakalo zeNtlungu ezisixhenxe: NgoLwesibini nangoLwesihlanu
Imbali yerosari yeRosa Mystica
Iimbono zeNtombikazi kaMariya njengoRosa Mystica, yaqala malunga nowe-1947 eMontichiari, e-Itali. Efumaneka emazantsi eAlps yase-Itali. Kokunye ukubonakala kwakhe ukusukela ngonyaka we-1975, uMama wethu uyaqhubeka nokudlulisa imiyalezo kwaye enze izithembiso, akayeki nokugxininisa ukubaluleka komthandazo. Ngo-1966 ithi:
«Ntombi, jonga apha Ingcwele yeRosari! Bonke abo bayithandazelayo baya kufumana ubabalo olungenasiphelo. Irosari yenza unxibelelwano olomeleleyo nentliziyo yam kwaye uzukise iNkosi yezulu noMhlaba. Ndikhuthaze bonke abo bandithandayo ukuba balungise iimpazamo ezibangelwe nguNyana wam oyiNgcwele uYesu Krestu. Bantwana bam, thandanani ... nincame uthando. Umthandazo luthando olunyukela ezulwini. Ndiyathemba ukuba bonke abantwana bam bayawuqonda umnqweno wam wokuwuzalisekisa. Intsikelelo yeNkosi yehlela kubo bonke!
Okwangoku, umzobo we-Holy Mystical Rose uyaqhubeka kwizibingelelo kunye nomfanekiso owawunayo ngaphakathi kwi-Rosenberg Sanctuary: ngengubo emhlophe eneentyatyambo zayo ezi-3 (enye emhlophe, enye ibomvu embindini enye igolide ngasekhohlo) irhangqwe yi-halo ekhanyayo ehonjiswe ngeentyatyambo zegolide ezili-13 kwicala lasekunene nangasekhohlo.
Indlela yokuthandaza iRosari kwiRosa Mystica
Oku kwaziwa ngokuba yi "Rosary yeinyembezi negazi." Ukuqala ukuthandaza le rosari, kufuneka silandele uthotho lwamanyathelo abalulekileyo. Njengakuwo nawuphi na umthandazo, nokuba umfutshane okanye mde, kufuneka siqale ngokwenza umqondiso weSanta Cruz okanye ukuwela ngokwethu njengoko kusaziwa njalo.
Ngophawu loMnqamlezo oyiNgcwele, sihlangule kwiintshaba zethu Nkosi, uThixo wethu, egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele, amen.
Isivakalisi sokuvula senziwa, esithi: UYesu wabethelelwa emnqamlezweni, uguqe ezinyaweni zakho, sikunika "iinyembezi negazi" lalowo wayekukhapha ngothando nemfesane kwindlela yakho yoMnqamlezo. Siphe ubabalo, O Master elungileyo! ukuthabathela entliziyweni iimfundiso eziqulathwe "kwiinyembezi kunye negazi" likaMama wakho osikelelekileyo ukufezekisa ukuthanda kwakho ngendlela yokuba kufanelekile ukukudumisa sikuzukise ngonaphakade. Amen.
Ngokungafaniyo neRosari eqhelekileyo, kule mfihlakalo iyi-7 kuyathandazwa eyaziwa ngokuba ziiMfihlelo zoLonwabo ezisixhenxe kunye neZintlungu ezisixhenxe.
Imfihlelo yokuqala iyabhengezwa kuxhomekeke kumhla ohambelana nayo. Endaweni kaBawo wethu uBawo kuthiwe:
V: Owu Yesu wam, jonga iinyembezi kunye negazi lalowo wakuthanda kakhulu emhlabeni A: Kwaye uyakuthanda lolona thando lukhulu ezulwini.
Endaweni yesichotho uMarys kuthiwa:
V: Oh Yesu yiva imithandazo yethu.
R: kwiinyembezi kunye negazi likaMama wakho osikelelweyo. (kasixhenxe).
Imfihlelo yesibini iyabhengezwa: Senza okufanayo nakwinqaku elingunombolo 3. Ekupheleni kweRosari, kuthiwa kathathu: "Owu Yesu wam, jonga iinyembezi kunye negazi lalowo wayekuthanda kakhulu emhlabeni kwaye ekuthanda kakhulu kwezothando ezulwini."
Owu Mariya, Mama Wothando, Wosizi Nenceba, siyakucela ukuba udibanise imithandazo yakho kunye neyethu ukuze uYesu, esiya kuye noomama bakho "Iinyembezi neGazi" egameni, ayive imithandazo yethu, asinike ubabalo. ukuba Siyakucela, isithsaba sobomi obungunaphakade, Amen.
Iinyembezi zakho kunye negazi lakho O Mama olusizi, tshabalalisa ubukumkani besihogo. Ngobulali bakho bobuThixo, O Yesu ebotshelelwe, gcina umhlaba ungoyikisi izoyikiso.
Sigqibile, Egameni loYise neloNyana nelikaMoya oyiNgcwele. Amen
Iimfihlakalo zovuyo ezisixhenxe: NgoMvulo, uLwesithathu, uLwesine, uMgqibelo nangeCawa.
Imfihlelo ye-1: Ukukhetha ukuba uBathathu Emnye Ongcwele umnika yena phezu kwazo zonke izidalwa.
Imfihlakalo yesi-2: Ubuntombi obamphakamisela ngaphezulu kweeNgelosi kunye neeNgcwele.
Imfihlakalo yesi-3: Ubuqaqawuli obukhanya ezulwini kunye nozuko lwakhe.
Imfihlakalo ye-4: Unqulo olwenziwe ngabo bonke abakhethiweyo njengoMama kaThixo.
Imfihlakalo yesi-5: Ukukhawuleza apho uNyana wakhe oyiNgcwele ahambelana nazo zonke izicelo zakhe.
Imfihlakalo yesi-6: Ubabalo olufunyanwa ngabakhonzi bakhe kuYesu kulo mhlaba, kunye nozuko abalungiselele yena ezulwini.
Imfihlakalo yesi-7: Ukufumana ubuhle kunye nokugqibelela okukhulu.
Iimfihlakalo zeNtlungu ezisixhenxe: NgoLwesibini nangoLwesihlanu
Imfihlelo ye-1: Xa wayesondeza uNyana wakhe phambi kweNdlu, weva isiprofetho esivela kwindoda endala "uSimon:" Ikrele leentlungu liya kuwugqobhoza umphefumlo wakho.
Imfihlakalo yesi-2: Xa wanyanzelwa ukuba abalekele eYiphutha, ebaleka ukutshutshiswa nguHerode owayefuna ukubulala uNyana wakhe amthandayo.
Imfihlakalo yesithathu: Xa wafuna iintsuku ezintathu zonyana wakhe owayehleli eTempileni eJerusalem, emva kotyelelo ngexesha lePasika.
Imfihlakalo yesi-4: Xa wafumana uNyana wakhe oyiNgcwele ethwele umnqamlezo onzima emagxeni akhe esiya eKalvari ukuba abethelelwe emnqamlezweni kuwo ukuze sisindiswe.
Imfihlakalo yesi-5: Xa wabona uNyana wakhe enegazi kwaye esifa iiyure ezintathu emva koko waphefumla okokugqibela.
Imfihlakalo yesi-6: Xa uNyana wakhe oyiNtanda, wahlatywa esifubeni ngomkhonto, wehliswa emnqamlezweni kwaye wabekwa ezingalweni zakhe.
Imfihlakalo yesi-7: Xa wayecinga ngomzimba woNyana wakhe oyiNgcwele ulele kwi-Sepulcher.
Ukuba ulithandile inqaku lethu ngeRosari ye-Mystic Rose, siyakumema ukuba ubone iwebhusayithi yethu, apho uya kuba nemithandazo emininzi kunye nezicelo zokuthandaza, njengoko kunokuba njalo Isikhokelo sokuthandaza iRosari. Ngokukwanjalo, siyakumema ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo, eya kuthi ikufundise ukuba uthandaze ngendlela efanelekileyo.